ट्रम्पलाई अमेरिकी जनताको प्रश्न एक लाखको मृत्यु भएको छ, तपाईंलाई चिन्ता छ ? ब्राजिलका जनताले राष्ट्रपतिलाई भने हत्यारा -
May 26, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on ट्रम्पलाई अमेरिकी जनताको प्रश्न एक लाखको मृत्यु भएको छ, तपाईंलाई चिन्ता छ ? ब्राजिलका जनताले राष्ट्रपतिलाई भने हत्यारा
एजेन्सी १३ जेठ । अमेरिका, ब्राजिल र बेलायत कोरोनाभाइरसद्वारा सर्वाधिक प्रभावित ५ देशको सूचीमा समावेश छन् । बढ्दो संक्रमण र लगातारको मृत्युका कारण तीन देशका जनता रुष्ट छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले लगातार दुई दिन गल्फ खेले । उनको यस्तो कदममा मानिसहरुले विरोध गरिरहेका छन् । गल्फ क्लब बाहिर केही मानिसहरु पम्प्लेट लिएर उभिएका थिए । यसमा लेखिएको थियो, ‘१ लाख मारिएका छन् । हामीलाई चिन्ता छ । के तपाईंलाई चिन्ता छ रु’
ट्रम्पको निर्णय विपरित WHO मलेरियाको औषधि कोरोनाका बिरामीमा परीक्षण गर्न डब्लुएचओद्वारा रोक
कपिलवस्तुको क्वारेन्टाइनमा बसेका ३० जना भागे
उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने १०३ सवारी जताबाट आए उतै फर्काइए
गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा अधिकारीको बैठक जारी
November 1, 2019 अखवार अनलाइन
स्पेनमा डुंगा दुर्घटना हुदा १२ जनाको मृत्यु, ३३ जनाको उद्धार
December 21, 2018 December 21, 2018 अखवार अनलाइन
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४२ पुग्यो, उदयपुरमा थप ११ जना भेटिए
April 21, 2020 अखवार अनलाइन
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सांसद दीपक मनाङ्गे २७ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहाइ